Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ France Steven Nzonzi Nwa akwukwo akuko karia eziokwu
LB na-egosi Full Story of a French French Genius nke onye a maara aha ya "Nzonzi". Anyị Steven Nzonzi Child Story plus Ịkọwapụta akụkọ ndụ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ akụkụ nke Ndị 23 ndị France na-emeri 2018 ụwa cup na Russia ma naanị ole na ole na-atụle Steven Nzonzi's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Steven Nzonzi Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma nke oma -Ndụ mbido
Malite n'aha ya bụ Steven N'Kemboanza Mike Nzonzi. A mụrụ ya na 15th nke December 1988 na Colombes, France na nne na nna nke agbụrụ. Nna ya, Nzonzi Snr sitere na Congo mgbe nne ya bụ onye France.
N'ịbụ onye na-eto eto na Colombia dịpụrụ adịpụ nke Paris, Young Nzonzi nwere mmalite mmalite nke ndụ tinyere ụlọ ọrụ ụmụnna abụọ na nwanna nwoke nwere obi ụtọ. Ka o sina dị, nna ya (onye ga-emesị mee ka steven pụọ site na klọb mgbe ọ bụla ọ na-eche ọdịnihu dị egwu maka nwa ya nwoke) mere ka ọ mara na ọdịnihu ga-abụ ndị na-ewere ọrụ ikpebi oge.
Ihe ọhụhụ ahụ mere ka ọ malite ịmalite ọrụ football ya na Racing Paris n'oge dị mkpụmkpụ nke 10 ma na-eduzi ya na mkparịta ụka na-aga n'ihu n'ọtụtụ klọb ndị ntorobịa gụnyere SC Levallois (1994-1999), Paris Saint-Germain (1999-2002) , CA Lisieux (2002-2003) na SM Caen (2003-2004).
Steven Nzonzi Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma- Football Progress
Steven Nzonzi amaghi onye ọ bụla site na klọb ndị ntorobịa ya naanị ịmalite ịmalite ọbịbịa mgbe ọ banyere na SC Amiens U19 club na 2005 wee nwee nkwalite na otu ndị okenye na 2009.
Ọ bụ na SC Amiens na Nzonzi gosipụtara nkà dị elu footballing na-eme ka obodo ya DR Congo, France na England na-achọ ịkwado ọrụ ya maka ndị otu mba ha. Nzonzi tụgharịrị ala ma France ma nwee mba mbụ ya na ndị na-eso 21 nọ na 2009.
Steven Nzonzi Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma- Bilie Iji Mara Aha
N'ịga n'ihu na ọrụ ụlọ ọrụ ọkachamara, Nzonzi gara Blackburn ebe ọ na-enwechaghị mmetụta. Ná ngwụsị nke oge 2011-2012, ọ banyere na Stoke obodo ma rụọ ọrụ dị egwu nke mere ka 2014-15 Player nke Year award tupu ya akwaga Sevilla na 2015.
Na Sevilla, Nzonzi kwalitere ma nọgide na-enwe n'elu ụdị ya, na-emeri UEFA Europa Njikọ na 2016 na ụlọ ịgba egwu nakwa ka UEFA Europa League Squad nke Oge.
Iji kpoo ya nile, o kwadoro òkù ịkpọ òkù maka Òtù Mba France dị na Russia 2018 Fifa World Cup bụ nke ọ na-adakarị na 23 ndị agha. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Steven Nzonzi Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma- Ndụ mmekọrịta
Nzonzi enweghi mmekọrịta kachasị mma maka ihe ndị na-enweghị ike ịchịkwa ya. Nọdụ ala ka anyị na-eme njem nleta banyere otú ịhụnanya si hụ ya n'anya n'ime afọ atọ.
Mba French nọ na Stoke City mgbe ọ lụrụ di na nwunye ya a na-alụkwaghịm, Lynda Nzonzi na 2013 mgbe ọnwa ole na ole na-akpa na nzuzo. Ihe niile yiri nke ọma n'alụmdi na nwunye ha bụ nke a gọziri nwa nwoke Ayden. Ọnwa 4 mgbe amuchara nwa ha nwoke, Nzonzi guzoro ikpe n'ụlọikpe mgbe nwunye ya boro ya ebubo na ọ na-eti ya n'ihu nwa ha maka ịkpọ ya 'nna na-abaghị uru'.
Na nzaghachi na ebubo Nzonzi kwusiri ike na ọ bụ nanị na-agbalị ime ka nwunye ya (onye na-ahụ anya na-ewe oké iwe) site na ijide mkpịsị aka ya mgbe ọ na-ekwu na ya abaghị uru n'oge mkparịta ụka ekwentị na nne ya
Nzonzi agbachitere nke ọma na ndị isi obodo Cheshire nke kpochapụrụ ya na mwakpo. Otu ụbọchị mgbe ikpe gasịrị, Lynda gbara akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm na Nzonzi na-akwado nkewa ahụ site na ịchọta na alụmdi na nwunye ha 'emebiwo ala n'enweghị ihe kpatara ya'.
Steven Nzonzi Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma- N'iji tụnyere Patrick Vieira
Steven Nzonzi agafewo oge, ma e jiri ya tụnyere akụkọ banyere Patrick Vieira na ọtụtụ akụkọ Spanish. Nyocha nlezianya nke nlereanya na-ekpughe na ha adịbeghị anya-na-esite na karịsịa dị mkpa karịsịa n'oge nke post a mgbe Vieira na-ahapụ Sevilla maka Arsenal.
Patrick Vieira, bụ onye na-ahụzi Niece ugbu a bụ akụkọ akụkọ football nke na-arụ ọrụ nke ọma na Arsenal dị ka onye etiti Central Central, ebe Nzonzi rụzuru onwe ya. Site na Vieira pụọ ​​na 2005, Arsenal esiwanyewanye ike ịchọta midfielder nke nwere oke nke ike Vieira nke achọpụtara na Nzonzi.
Tụkwasị na nke a, ma Vieira na Nzonzi bụ ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị mbụ nwere elu nke 1.93m na nke ikpeazụ na-ebute 1.96m! Iji kpoo ya ma mmadụ niile emeriwo FIFA ụwa na otu ìgwè ndị France.
Otú ọ dị, Nzonzi anaghị eche na ọ na-agbakwụnye akụkọ ahụ dị ka ọ na-ekwu na:
Adị m ogologo, enwere m otu ọnọdụ ahụ na II'm French dị ka ọ doro anya, ị nwere ike ịme ihe atụ ahụ mana ejighị m n'aka na ọ dị mma n'ihi na ọ ga-esiri ike ịkọ ihe ọ mere, '
Steven Nzonzi Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma- Mmetụta na-enweghị isi
Ọ bụ ezie na Nzonzi mere ọtụtụ ihe iji kwụsị esemokwu, omume ya mgbe Sevilla 5-0 humiliation site na Barcelona na Final Cup nke Spanish na 2018 mere ka ndị na-eche ebe ọ na-eguzosi ike n'ihe dị. Sevilla rụsiri ọrụ ike iji nweta Final Final nke Spanish Cup n'ikpeazụ ka Barcelona merie ya na oke akara nke mere ka ụlọ ịgba chaa chaa.
Na njedebe nke egwuregwu, Nzonzi mehiere na ntụrụndụ abụọ, Nke mbụ bụ ọjụjụ ọ na-ajụ ikele ndị agbụrụ maka enyemaka nkwado ha site na mgbasa ozi Spanish na nke ọzọ, nke mere ka iwe ya bụrụ ihe oriri na nkwari egwu Madrid n'otu ụbọchị akụkụ ahụ mere ka ọ daa ụda.
N'ịchọpụta nsogbu nke mkpebi ya nke ọtụtụ ndị na-akọwa dị ka ndị na-enweghị isi, Nzonzi nke jidere ya na-etinye aka na Sevilla's tracksuit (ụzọ aghụghọ iji gosipụta iguzosi ike n'ihe ya) na-akọwa mgbaghara nke gụrụ:
"Achọrọ m ịrịọ ndị Sevilla mgbaghara," ka akwụkwọ akụkọ NZonzi kwuru. "Emere m ihe ndudue n'ihi na m hapụrụ mgbe egwuregwu ahụ gasịrị. Ihe mere bụkwa ihe siri ike maka ndị egwuregwu ahụ. Anyị na-egwu ụbọchị atọ, naanị m na-azụ, m na-alaghachi n'ụlọ. Anọ m n'ụlọ mgbe niile. Ụnyaahụ, ndị ezinụlọ m na ndị enyi m nọ ebe ahụ ma ahapụ m. "
Steven Nzonzi Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma- Mmekọrịta na Ọkpara
Steven Nzonzi nọgidere na-enwe mmekọrịta chiri anya na nna ya nwoke, Ayden n'agbanyeghị agbamakwụkwọ ya gbara alụkwaghịm. Nna di mpako nke na-enweghi mmekorita di n'etiti ya adighi akwusi iwelite foto ndi a huru n'anya na onwe ya na nwa ya nwoke tinyere ogbagba nke na egosi ya n'eme ndi dike akuku World na Ayden.
Steven Nzonzi Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma- Eziokwu ahụ
Nzonzi àgwà bụ multidimensional na onye na-apụghị n'ezie abata na ọgwụgwụ na ekele na onye ọ bụ n'ezie. Ka o sina dị, Nzonzi akọwawo na ọ na-emekarị ngosi dị nro na mgbapụ mmetụta uche na mpaghara egwu.
'M na-adaghachi na ndụ ma na pitch, M nwere ike inwe ezigbo nkụda mmụọ na obi, nwere nnukwu ihe dị iche. Enwere m ike nke ukwuu, mgbe niile. Enweghị m mmasị ịgafe na-efu. M na-achịkwa ya ugbu a ugbu a ma ka na-eme m, mgbe ụfọdụ enwere m nkụda mmụọ ngwa ngwa. '
Steven Nzonzi Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma- Eziokwu ndị ọzọ
Nzonzi echere mgbe nile na ị na-egwu egwu na egwuregwu ndị na-eme egwuregwu, nrọ nke na-ele anya na ọ ga-emezu dịka ọ na-esetịpụ maka ịlụ agha.
Mgbe Nzonzi nọ na Stoke City, o kpuchiri 134miles na egwuregwu 19, ebe dịpụrụ anya nke mere ka ọ dị egwu site na egwuregwu ndị ọzọ.
Ọ bụ ọrụ ndụ ya na-achịkwa akụkọ mgbasaozi ya.
Ọ na-ekwusi ike na aha ya dị ka Nzonzi, ọ bụghị N'Zonzi
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Steven Nzonzi Childhood nke akụkọ akụkọ ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.